बिप्लप नेतृत्वका २ जना चन्दा माग्दै गर्दा दाङमा पक्राउ
आयआर्जनका लागि ८० बर्ष उमेर समूहका कृषक समूहमा
नराम्रा कुरालाई मात्र समाचार नबनाई राम्रा कुरालाई पनि लेख्नपर्छ ः बस्नेत
नँया बर्षमा २ वटा खराव बानीलाई त्याग्नुपर्ने ः कार्यबाहक मूख्य न्यायाधिस आचार्य
७५३ तहमा सुचना हक कार्यान्वयनका लागि आयोगको निर्देशन
उपभोक्ताहरु माग पुरा गर्न सकिएको छैन ः खानेपानि अध्यक्ष वली
नेता खड्कालाई सम्झदै सहकर्मीहरुले रोक्न सकेनन् आँशु
२८ गतेका दिन काग्रेस नेता खड््काको श्रद्धाञ्जली सभामा देउवाले सम्बोधन गर्ने
१४ हजार जनालाई स्वरोजगार सम्बन्धि तालिम
सडक निर्माण अब्यबस्थीत हुदा आसपासका बासिन्दा पीडित
अनमोल केसी अचेल एकान्तबासमा छन्।
यसै साता उनी आफ्ना हितैषी अभिनेता सलोन बस्नेतको ब्रतबन्धमा पुगेका थिए। नेपाली फिल्मका चर्चित अनुहार अनमोललाई नचिन्ने त्यहाँ सायदै थिए।
चिसोबाट जोगिन मात्र होइन, नयाँ फिल्मको चरित्रका लागि पालिरहेको कपाल नदेखाउन उनले टाउको छोपेका थिए। उनी क्यामराबाट सकेसम्म टाढै रहे। मिडियाले क्यामरा तेस्र्याउन लागेको चाल पाउनेबित्तिकै कुनातिर घुसिहाल्थे।
सुपरहिट ‘ड्रिम्स’ र ठिकठिकै व्यापार गरेको ‘गाजलु’ पछि अनमोलले नयाँ फिल्म ‘कृ’ का लागि २० लाख पारिश्रमिक लिएका छन्। त्यही फिल्मको हस्ताक्षरवाला र २२ लाखको बाइकमाथि चढेको तस्बिरबाहेक पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा उनको ताजा अनुहार उति देखिएको छैन। फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि पहिलेजस्तो नयाँ फोटो पोस्ट गर्न कम गरेका छन्।
क्यामराकै माध्यमबाट ‘स्टार’ बनेका अनमोल किन त्यसैबाट तर्किन्छन् त अचेल?
कारण हो, कृ।
फिल्ममा उनको जोडी बन्न लागेकी अदिती बुढाथोकी भारतबाट आइसकेपछि वर्कसप सुरु हुने कृ डेढ महिनापछि सुटिङमा जानेछ।
करिब एक वर्ष अरू फिल्म खेल्न नपाइने सर्तमा मोटो रकम पारिश्रमिक लिएको भनिएको कृको चरित्रका लागि अनमोल कठोर अभ्यासमा छन्। सुटिङ सुरु नहुञ्जेल मिडियासँग फोनमा बाहेक भेटेर अन्तर्वार्ता दिन बन्देज छ।
यो नियम फिल्म टिमले बनाएको भने होइन, अनमोल आफूले आफैंलाई अनुशासनमा बाँधेका हुन्।
यो अनुशासनले उनको दैनिकीसमेत फेरिएको छ।
उनी बिहान पाँचै बजे उठ्छन्। घरमा काम गर्ने मान्छे भए पनि आफैं खटिन रुचाउँछन्। सरसफाइदेखि आफ्ना थुप्रै काम आफैं गर्छन्। कहिलेकाहीँ आफूलाई मन पर्ने भगवानको पूजा गर्छन्। संगीत सुन्छन्। ध्यान गर्छन्। जंगलतिर दगुर्छन्। केहीबेर जंगलबीच एक्लै धुम्धुम्ती बस्छन्। उनलाई लाग्छ, घरैघरले ढाकिएको सहरबीच बचेका रुखका बाक्लो बस्तीभित्र बेग्लै शान्ति पाइन्छ। भन्छन्, ‘प्रकृतिसँग सिक्नु रमाइलो हुन्छ।’
कहाँको जंगल हो त्यो?
‘सेक्रेट,’ हाँस्दै भने, ‘त्यो पनि भन्यो भने त भोलिदेखि...।’
बोल्दा–बोल्दै रोकिए र फेरि हाँसे।
भोलिदेखि... यो खाली ठाउँमा के हुन्छ, अनमोलको स्टारडम थाहा भएकाले अनुमान लगाउन सकिहाल्छन्।
बाबुले बनाएको फिल्ममा बालकलाकारको भूमिका हुँदै १७ वर्षको उमेरमा हिरोका रूपमा खेलेको ‘होस्टल’देखि गाजलुसम्म उनका लगभग सबै फिल्म हिट छन्। चकलेटी अनुहारबाट बनेको ‘फेस भ्यालु’ कै कारण फिल्म चल्ने एक्ला अभिनेता उनै हुन्।
अनमोलले अहिलेसम्म समीक्षकहरूबाट भने जस पाएका छैनन्। फिल्ममा उनी प्रमुख भूमिकामा भए पनि अभिनयमा उनको तुलना कि अभिनेत्रीसँग हुन्छ, कि उनकै सह–अभिनेतासँग।
‘अनमोल अभिनयले होइन, लुक्सले चलेका हुन्,’ अहिलेसम्म अधिकांशको भनाइ यही छ।
अनमोल आफैं समीक्षक भएर हेर्दा उनलाई पनि आफ्नो अभिनय अघिल्ला फिल्मभन्दा खारिएझैं त लाग्छ, तर चित्तबुझ्दो अहिलेसम्म पाएका छैनन्। हुन त अधिकांश अभिनेताले आफ्नो कमजोरी आफैं पहिल्याउँछन्। हरेक फिल्म तारन्तार हिट भए पनि बारम्बार पाइने अपजस उनले निकै ख्याल गरेका रहेछन्। उनलाई आगामी फिल्मबाट त्यो मेटाउनु छ। र, प्रमाणित गर्नु छ, ‘अनमोल अभिनयले नै हिरो भएको हो।’
‘अभिनय गर्न नजान्ने हिरो’ भन्नेहरूप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताउने अनमोल यस्तै समीक्षाका कारण नै आफू झनै गम्भीर भएको भनाइ राख्छन्।
‘फ्यानहरूले त मैले जस्तो गरे पनि राम्रो भनिहाल्नुहुन्छ,’ बोल्दा धेरै अंग्रेजी मिसाउने अनमोल भन्छन्, ‘क्रिटिसिज्मले नै मलाई स्ट्रोङ बनाएको हो। पहिलेभन्दा झन् राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने प्रेसर हुन्छ। लुक्सका कारणले होइन, अनमोल एक्टिङ पनि राम्रो गर्ने मान्छे हो भन्ने इख राखेर काम गर्ने सोच क्रिटिसिज्मले नै बनाएको हो।’
उनी अहिले त्यसैका लागि घोटिइरहेका छन्। उनले आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोप मेटाउने चुनौति स्वीकारेरै कृमा खेल्न तयार भएको बताए। अहिलेसम्म आफूसरहको उमेरको चरित्रमा मात्र खेल्दै आएका अनमोल कृमा आफूभन्दा बढी उमेरको भूमिकामा देखिँदैछन्।
आफूले भोगिसकेको परिस्थिति कल्पना गरेर अभिनय गर्दा तुलनात्मक रूपमा सहज मानिन्छ। तर, आफूले भोगेभन्दा बेग्लै परिवेश र बेग्लै सोचाइको चरित्रका लागि बढ्तै कसरत गर्नुपर्छ। अहिले अनमोल आफूले खेल्ने पात्रले बोल्ने, हाँस्ने, हिँड्ने तरिकादेखि सोच्ने तरिकासम्ममा विविधता ल्याउन पात्रबाट आफूलाई अलग्याउने अभ्यासमा छन्।
देख्दा आत्मकेन्द्रित लाग्ने अनमोल खुल्दै गएपछि ठट्टा गर्न पछि हट्दैनन्। चकलेटी अनुहारमा देखिने मुस्कानबाट मूलतः युवती फ्यान धेरै कमाएका अनमोल ठट्टा गर्दै सुनाउँछन्, ‘स्माइल त चेन्ज गर्दिनँ। त्यही स्माइल त धेरैले मन पराएका छन्।’
खैर, उनी अहिले आफूलाई अर्कै रूपमा ढाल्दैछन्। त्यसैले बाहिर आउन त्यति रुचाउँदैनन्।
‘हुन त म पहिले पनि सार्वजनिक ठाउँमा जान त्यति रुचाउने खालको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘म कामबाट चिनिन चाहन्छु। यत्तिकै आफूलाई के देखाउनु भनेर नि!’
बिहान जंगल चहार्ने, पूजा गर्नेजस्ता काम सकाएर खाना खाएपछि दस बजेदेखि सुरु हुन्छ, उनको कसरत। दिनभर जिम्न्यास्टिक, जिम, डान्स क्लासमा व्यस्त हुन्छन्। फुर्सदका बेला फिल्म हेर्ने, किताब पढ्ने, संगीत सुन्नेदेखि लिएर युट्युबमा अनेक भिडियो हेर्छन्। जसमा आफ्नाबारे बनेका गसिप, समाचारदेखि चरित्रका लागि चाहिने खर–खजाना भेट्छन्।
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फोटा धेरै नराखे पनि ‘फ्यान’ ले के भनिरहेका छन् भन्ने ख्याल गरिराखेकै हुन्छन्। तर, पहिलेजस्तो उति झुन्डिएर बस्दैनन्। त्यसले आफूले गरिरहेको काममा असर पार्छ भन्ने लाग्छ उनलाई।
शारीरिक अभ्यासका लागि बाहिर जाने ‘मुड’ छैन भने घरभित्रै ठूलो कोठामा जिमदेखि डान्ससम्मका लागि चाहिने सबै स्रोत उपलब्ध छन्। राति खाना खाएपछि चाँडै सुत्छन्। किनकि, बिहान छिटै उठ्ने बानी छ।
काम परे मात्र बाहिर निस्कने उनी प्रायः कोठामा एक्लै बस्छन्। शारीरिकदेखि मानसिक रूपमा आफूभन्दा बेग्लै देखिन चाहिने चिजबिज बटुलिरहन्छन्। त्यसका लागि शरीरको स्वरुप बदल्नेदेखि कपाल पनि पालिरहेका छन्। तर, पर्दामा कपाल खुल्ला राख्दा, बाँध्दा या कुन स्टाइल ठिक हुन्छ, स्क्रिन टेस्ट गर्न बाँकी नै छ।
भन्छन्, ‘मेरो कोठा नै संसार, संसार नै कोठा। यहाँ म आफूलाई मन लागेको गर्न पाउँछु। यहीँभित्र मलाई चाहिने सोचहरू बनिरहेका हुन्छन्। यहीँभित्र मेरो विकास भइरहेको पाउँछु।’
यसो भन्दै गर्दा उनले आफैं ‘गर्लफ्रेन्ड’सम्मका कुरा आफैंले उप्काए। बाहिर उति नघुल्ने स्वभाव भएकै कारण साथीभाइ, आफन्तहरू भन्दा रहेछन्, ‘के हो, यत्तिको उमेरमा पनि बाहिरफेर हिँड्नु छैन। अहिलेसम्म किन गर्लफ्रेन्ड नबना’को?’
त्यही कोठाभित्रै उनी आफैंलाई आत्मसमीक्षा पनि गर्छन्। उनलाई लाग्छ, पहिलेभन्दा निकै परिपक्वता बढेको हो कि! पहिलोपल्ट हिरो भएर फिल्म खेलको उमेर १७ वर्ष र अहिलेको समयबीच तुलना गर्दा आफ्ना छनोट निकै बदलिएको उनी पाउँछन्।
‘उमेर पार गर्दै जाँदा मात्रै पनि धेरै कुरा बुझिँदो रहेछ,’ यतिबेला भने उनले गुनासो पोख्न भ्याए, ‘पहिलो फिल्म खेल्दा १७ वर्ष त थिएँ। संसारका धेरै राम्रा कलाकारमा निकै उमेर बितेपछि सिरियसनेस देखिन्छ। मलाई पहिलेका फिल्म पछिल्लाभन्दा खल्लो लाग्दै जान्छन्। हुन त सय प्रतिशत नै त कसैले पनि दिन सक्दैन। उमेरअनुसारको भोगाइले उसको क्यारेक्टरमा ठूलो रोल प्ले गर्दो रहेछ। एजअनुसार अभिनयमा पनि सिरियसनेस थपिँदै जाने रहेछ।’
अनमोल अहिले कम उमेरमै पाको भूमिका पाएकोमा दंग छन्। तर, चुनौति पनि उत्तिकै छ।
‘एक्टिङ मलाई मन पर्ने काम हो। मन पर्ने काम गर्दा जति नै गाह्रो भए पनि आनन्द आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले अहिलेसम्म नगरेको काम देखाउन पाउने भएकैले कृ रोजेको हुँ।’
यी सबै कुराले अनमोलमा देखिएको परिपक्वताको संकेत दिन्छ। उनको यो परिपक्वतामा ‘कूटनीतिक शिल्प’को झल्को पनि पाइन्छ। झन्डै आधा घन्टा कुरा गर्दासम्म उनको चरित्रबारे जुन कुरा सोधे पनि उनी भन्थे, ‘सरप्राइज।’